Otu esi edozi okwu na-ezighi ezi na YouTube? - YTpals
N'agbanyeghị mbọ ị na-etinye n'ime imepụta vidiyo gị, a ga-enwe ọtụtụ mmadụ, ewezuga ndị debanyere aha gị na-eguzosi ike n'ihe, ndị na-agaghị amasị ọrụ gị. Ị nweghị ike ịtụ anya okwu dị mma n'aka onye ọ bụla. Ị nweghị ike ime onye ọ bụla ụtọ. Ụfọdụ n'ime ndị a ga-ewepụta okwu na-adịghị mma ma ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị, ma ọ bụ iji kwupụta nghọtahie ha ma ọ bụ iji wetuo aha gị. Enwere ụzọ dị iche iche ndị okike si emeso ndị dị otú ahụ n'ịntanetị, mana nke kacha baa uru bụ ntọala okwu YouTube.
Ebee ka ntọala nkọwa YouTube dị?
YouTube Studio bụ ebe ị na-agbanwe ntọala nkọwa YouTube. Agbanyeghị, ị kwesịrị ịma na ịnweghị ike ịgbanwe ntọala nkọwa ma ọ bụrụ
ọwa ma ọ bụ vidiyo bụ maka ụmụaka (a na-ehichapụ nkwupụta kpamkpam mgbe a gbanwere ntọala ka ọ bụrụ "emere maka ụmụaka")
vidiyo a bụ nke nzuzo
ị nwere akaụntụ na-elekọta iji YouTube.
Otu esi agbanwe ntọala nkọwa ndabara?
Ị nwere ike ịgbanwe ntọala nkọwa YouTube nke ndabara ka ịzenarị okwu na-ekwesịghị ekwesị na ibe ụlọ ọwa gị ma ọ bụ na vidiyo ọhụrụ. Nke a bụ usoro ị ga-eso:
Gaa na YouTube Studio.
Họrọ "Ntọala" site na menu n'akụkụ aka ekpe.
Gaa na "Community" wee pịa "Ebube."
Họrọ ntọala ndabere gị wee pịa "Chekwa."
Ị nwekwara ike ịtụle ịgbanwe ntọala nkọwa maka vidiyo site na isoro usoro ndị a:
Gaa na ibe ọdịnaya gị, nke na-egosi vidiyo gị niile. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ntọala maka ọtụtụ vidiyo, ị nwere ike ịga na nnukwu ndezi.
Họrọ "Ọdịnaya" site na menu n'akụkụ aka ekpe.
Pịa na thumbnail nke vidiyo.
Pịa na "Nhọrọ ndị ọzọ."
Họrọ ntọala okwu gị n'okpuru "Ekwupụta na ọkwa" wee pịa "Chekwa."
Kedu ihe ọzọ enwere ike ịme?
Ịgbanwe ntọala nkọwa YouTube gị bụ nnukwu ụzọ iji zere okwu na-ekwesịghị ekwesị na ibe ọwa gị ma ọ bụ na vidiyo gị. Ma gịnị ma ọ bụrụ na nkwupụta abanyelarị na ibe gị? Kedu ka esi eme nke a?
Ọfọn, ị nwere ike ịme ihe abụọ na ọkwa nkwupụta. Nke mbụ, wepụ okwu na-ekwesịghị ekwesị yana azịza niile ọ nwetara. Ị nwere ike ime nke a site na ịpị akara atọ dị n'akụkụ nkọwa ahụ. Pịa na "Wepụ," a ga-ehichapụ ya kpamkpam. Ị nwekwara ike ihichapụ ihe kwuru na taabụ "Okwu" na YouTube Studio.
Ihe ọzọ ị nwere ike ime bụ ịkọwa okwu na-ekwesịghị ekwesị. Nzọụkwụ a na-ebute nkọwa ahụ na ọkwa YouTube, nke nwekwara usoro ntụzịaka nkọwa nke ya. Ọ bụrụ na nkwupụta ahụ mebiri iwu nke YouTube Community Guidelines, mgbe ahụ ị nwere ike ịtụ anya na ikpo okwu ga-ewepụ ya.
N'ikpeazụ, ị kwesịrị ị zoo onye ọrụ nke biputere okwu na-ekwesịghị ekwesị. Mgbe ịmere nke a, a na-egbochi onye ọrụ ahụ ka ọ mee ihe ọ bụla na vidiyo gị ma ọ bụ ọwa gị. Ị nwere ike igbochi onye ọrụ na nkwupụta n'onwe ya ma ọ bụ site na taabụ "Community" na ntọala gị.
Kedu ihe YouTube na-eme ọzọ?
Nhazi nke ntọala ikwu okwu YouTube bụ nnukwu uru maka ndị na-emepụta ọdịnaya, mana ikpo okwu anaghị ahapụ okwu ọ bụla iji chebe nzuzo na iguzosi ike n'ezi ihe nke obodo ya. N'oge na-adịbeghị anya, YouTube kwupụtara na ọ na-abịa na njirimara ọhụrụ nke ga-enye ndị na-ekwu okwu ohere iweghachi azụ azụ ma tụgharịa uche n'okwu ịkpọasị ha.
Akụkụ ọhụrụ a nwekwara ike ịmepụta ihe nzacha maka ndị okike YouTube ka ha zere okwu na-emerụ ahụ, na-ekwesịghị ekwesị. Ọ bụ eziokwu na ndị na-emepụta ọdịnaya emeela mkpesa maka ogo nkwupụta n'elu ikpo okwu kemgbe ọtụtụ afọ. Mana njirimara ọhụrụ ahụ kwesịrị inwe ike ileba anya na nchegbu ogologo oge a na ndị na-emepụta ihe na-eme ka ọ bụrụ ụdị mkpagbu ọ bụla na oghere ịntanetị.
Ntọala nkọwa YouTube nwere ike inyere gị aka ịzere okwu na-ekwesịghị ekwesị ruo oke. Agbanyeghị, ị kwesịrị ịma na ọ bụ akụkụ na akụkụ nke ahụmịhe niile. Ị ga-emeghere ndị ọrụ dị otú ahụ n'ihi na ha na-enye gị nlele eziokwu gbasara oghere ahụ. Nwee ndidi wee nọgide na-arụ ọrụ ọma gị.
YTpals nwere ike inyere gị aka ịmalite ọwa YouTube gị ndị debanyere aha YouTube n'efu, echiche, na mmasị. Kpọtụrụ anyị taa.
Otu esi edozi okwu na-ezighi ezi na YouTube? nke ndi edemede YTpals, 8 December 2021
Ftme ihe Zọrọ Ezi maka Coronavirus Site na vidiyo
Akwụkwọ ọhụrụ a na-akọ n'ọrịa COVID-19 na ụlọ ọrụ ọchụchọ enweghị mgbagha na ụlọ ọrụ ọchụchọ na-atọ ọchị na-etinye onwe ya dị ka ihe na-agbanwe agbanwe ma dị egwu. Mgbe obula Google weputara ohuru nke algorithms, ulo oru…
3 ofdị Ihe Ntinye vidiyo YouTube nke Ga-enweta Nsonaazụ - Ihe to Ga-Ama
N'agbanyeghị otu ọhụụ ma ọ bụ nke ọma guzobere ọwa gị, enweghị ịgọnahụ eziokwu ahụ bụ na e nwere ụfọdụ ụdị vidio vidio YouTube nwere ike inye ọdịnaya gị ezigbo nkwado na anya of
Ntughari na Nkpirisi Maka Nhazi YouTube
Ozugbo e gosipụtara akaụntụ YouTube gị nke ọma, ị ga-enwe nnwere onwe ịgbakwunye thumbnails omenala na vidiyo gị niile. Thumbnails bụ ihe mbụ ndị ọrụ YouTube na-ahụ mgbe ha na-eme nchọgharị na vidiyo nke ha ga-amasị…